नबुझेर विदेशिय, बुझेर फर्कन्छु, बाबा फर्केर म पनि राजनीति गर्छु | KTM Khabar
नबुझेर विदेशिय, बुझेर फर्कन्छु, बाबा फर्केर म पनि राजनीति गर्छु
२०७३ चैत्र २२ गते २०:४४ मा प्रकाशित
शाब्दिक परिर्वतनलाई नै ठुलौ परिर्वतन सम्झनेहरुसँग मलाई युगको अवश्यकता के हो ? यो प्रश्नको उतर लिनु छ । त्यसैले मेसीनको चर्को आवाजसँगै कामको थकाइमा पनि म आज विदेशी भुमीमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्ता शव्दको वास्तविक फरक खोजीरहेछु ।
अहिलेसम्म भन्दै आएको नयाँ नेपालमा २००७ सालबाट २०७३ सालसम्ममा कति नयाँ बन्यो ? यसको हिसाब किताबको लागि कलम चलाउँदै छु । आज छिमेकी दुई देश विश्व कै शक्ति राष्ट्र बनिरहँदा हामी तिनीहरुका सामु ठुलो रुख मुनी हुर्कन नसकेको विरुवा जस्तै किन छाँै ?, यसको उतर दिने मानिसको खोेजीमा छु ।
बाबा राजनीति फोहोरी खेल हो भनेर तपाईले सिकाएको पाठ विश्वविद्यालयको पढाई पुरा गर्नका लागि थियो । मैले तपाईले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेको छु । तपाईले खोजेको प्रमाणपत्र कमाई सके । त्यो कमाई सक्दा बल्ल आज राजनीति गर्न मन लागेको छ । यहाँ त विद्यार्थीलाई क, ख पढाउने शिक्षक देखि लिएर विरामीलाई उपचार गने डाक्टर बन्ने बनाउनेमा पनि योग्यता चाहिएको छ र योसंगै राजनीतिमा पनि चाहिएको छ । यो राजनीति भन्ने शव्दलाई प्रयोग गरेर यहाँ गोरुलाई गाई र गाईलाई गोरु बानाइएको छ । त्यसैले बाबा म राजनिती गर्न होइन सारा देश माथि भएको जवरजस्तिको राजनीति रोक्न राजनीति गर्न लाग्दै छु ।
बाबा मलाई छुट दिनुस तपाईको छोरा नेपाली आमालाई छोडी विदेशी भुमीमा पसिना बगाउँदै छ । अब म त्यो राजनिती चाहान्न फेरी पनि नेपाली भुमीमा राजनीति शव्दले देश अझ तल नझरोस ।
देश बनाउन चुनिएका नेताहरुसँग देश विकासको कुनै नयाँ ढाचा छैन । खाली राजनीति देश हाक्नका लागी हैन सत्ता टिकाउन मात्र केन्द्रित छन् । कहिले कसको सरकार त, कहिले कसको सरकार, कहिले कुनको समिकरण–कहिले कुनको समिकरण । यहि पारले देश चलिरह्यो । २६ वर्षमा २२ वटा सरकार बन्छ । सधै सरकारको खेल खेल्नेहरुसँग अब मलाई विकासको परिभाषा सोध्नु पर्ने छ । त्यसैले बाबा मैले राजनिती गर्नु पर्ने छ ।
मलेसिया, साउदी, कतारको गर्मीले खारीएका सयौँ तलाको घर चक्ला सडक बनाएका, फासी देखेका देखी लिएर जापान, कोरीया, चिन जस्ता देशमा मेसीनको स्पीडमा काम गरेकाहरुको संग्रह गर्ने छु । तिनै शक्तिलाई मिसाएर एउटा नयाँ चैतनशिल शक्तिको विकास गर्ने छु ।
आज विदेशमा रहेका नेपाली नेपालको सरकार र नेपालको राजनीति प्रती सन्तुष्ट छैनन्् । विश्वको कति देशमा कति नेपाली छन् त्यसको हिसाव पनि नेपाल सरकारसँग छैन होला । मजदुरी हाम्रो विबसता हो । मैले बुझेको आज मलेसीयामा ७ लाख, साउदिमा ३ लाख, कतारमा २ लाख भन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सारा घर परिवार, सुख दुख, माया मोह सबै त्यागेर उनिहरु आफ्नो लागी मात्र होइन देशको लागी पनि काम गरिहेका छन् । रगतलाई पसिनामा बदलेर नै देश चलेको रेमिट्यान्स तिनीहरुले नेपाल पठाएको हो । खै त्यसको हिसाब किताब कहाँ छ ?, अब हामीले यसको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ । हाम्रो उत्तर ३,४ घण्टाको भाषणमा हैन उपलब्धिमा चहिन्छ । हामी पनि देश चलाएका सिपाई जस्तै हौँ ।ं देश चलाउने पैसा कमाइ दिएका छौ । खै हाम्रो सम्बोधन, खै हाम्रो अधीकार, खै हाम्रो पहिचान यो मुद्दा उठाउनु छ । अब मजदुरले पनि देश चलाएको हेर्न मन छ । राजा रजौटा देखी देशको मै हुँ भन्नेले पनि देश चलाए । हुने खाने र हुदा खाने पनि उच्च पदमा पुगे । हातमा कलम लिनेले पनि देश चलाए र हातमा बन्दुक लिनेले पनि देश चलाए । खै त देशले के पायो ?
ठुला दल भन्नेहरु देखि भर्खर जन्मेका स–साना समुहले पनि सडक बन्द, उद्योग बन्द, स्कुल–कलेज बन्द, हस्पिटल बन्द जस्ता अतिसंवेदनशिल विषयलाई पनि हतियार बनाएर राजनीति गरे ।
मजदुरलाई देश चलाउने अधिकार दिलाउने योजना बनाउँन जरुरी छ । आज मेलेसीयामा रहेका ७ लाख नेपालीकहरुबाट पनि प्रधानमन्त्रीको उमेदबार भेटीन्छ कि ? भन्ने बारेमा पनि छलफल चलाउन जरुरी देख्छु । कोरीया, जपान जस्ता देशमा दैनिक १५,१६ घण्टा काम गरेकाहरुलाई नैपाल मै परिश्रम गर्नका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ । विदेशमा कमाएको पैसाले घर घडेरी मात्र होइन स्वदेशमा लगानी गरेर उद्यमी बन्नका लागि जोड दिन सकिन्छ । अब उर्जावान, चेनशील संयन्त्रको विकाश गर्नु छ । प्रत्येक देशबाट अब आन्दोलनको नेतृत्व चुन्नु पर्ने छ । अब यिनै दाजुभाईलाई मिलाएर विकासको ठुलो आधी चलाउनु छ ।
राजनीतिलाई एउटा निश्वार्थ समाज सेवा भनिए पनि एउटा लुटेर खाने भाँडो बनाउनेसँग असहमती राख्नु छ । संंसदमा विकासको योजनामा बहस गराउनु छ । भाग बण्डा अनी तेरो पक्ष र मेरो पक्ष, नाताबाद, कृपाबाद, घुस पैठरी रोक्नु छ । नियम र कानुनलाई अगाडी पार्नु पर्ने छ । त्यसैलै मैले विदेशी भुमीमा हुँदा हुदै पनि राजनीति गर्नु पर्ने छ ।
देशमा भएको बेरोजगारीलाई हटाउने ठुलो योजना ल्याउनु पर्ने छ । यस विषयमा सदन भित्र ठुलो बहस गराउनु पर्ने छ । व्याक्तिगत विरोध, पार्टीगत विरोध, कुर्सीको विरोध आदी विषयलाई पाखा लगाउनु पर्ने छ । विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएकौ पैसा, सिप, अनुभवलाई कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने ? भनेर छलफल चलाउनु छ । परिश्रमले पेट भरेकाहरुको अनुभवको चाङ्ग लगाउनु पर्ने छ । राजनीति गर्नेका लागी निश्चित परिधी तोक्नु पर्ने छ ।
हामीले पाईला चल्नै पर्छ नत्र ढिला हुन्छ । यो पुस्तासँग अब पनि पर्खने समय छैन । नयाँ विचारलाई अब मलजल गनु पर्नेछ । खाली भएका गाउँघरलाई फेरी हराभरा बनाउने मन छ । विदेसीएका सारा नेपालीलाई आफ्नै घरमा एक छाक मिठो, नमिठो खाने व्यबस्था गर्नु पर्छ । छुटेका मुटुहरुलाई जोड्नु पर्ने छ । टाढिएकाहरुलाई मिलाउनु पर्ने छ । परिवारसँग मिलेर दुख, सुःख साट्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । सोसल मिडियामा पोष्ट गरिएका गगन चुम्मी महल, समुन्द्री तटहरुमा खिचीएको फोटोहरु जस्तै छैन विदेश, दुखको पाठ सिकाउनु छ । तिनै दुःखले सिकाएको पाठले अब आफ्नै देशमा परिश्रम गरेर उन्नतीकोे क्षणका रोचक अनुभुतीहरु चढाउने भित्ता बनाउनु पर्ने छ ।
सु–सम्पन्न, समृद नेपालको परिकल्पना गर्नु पर्ने छ । विदेशी ग्रीन कार्ड लिएका नैपालीलाई पनि देश मै भित्र्याउनु छ । मजदुरीका लागी टाढिएका सबैलाई देश बनाउने अभियानमा सहभागी गराउनु छ । हामी विदेशीनुको कारण विदेशीएकाहरुबाट नै खोज्नु छ र समाधान पनि उनिहरुबाट नै लिनु छ । मेरो श्वार्थ पुर्तिको लागी हैन चेतना जगाउन लाग्दै छु । म नेपाली आमालाई रुवाउनेबाट खोसेर हसाउनेलाई सुम्पीने योजनामा छु ,। त्यसैलै बाबा म राजनीति गर्दै छु ।
(लेखकः कुमार शर्मा हाल दक्षिण कोरियामा कार्यरत छन् ।)